အစ်ကိုကြီးများ အတွက် ဘရန်းဒက် – Branded Beers | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အစ်ကိုကြီးများ အတွက် ဘရန်းဒက် – Branded Beers
အစ်ကိုကြီးများ အတွက် ဘရန်းဒက် – Branded Beers
Posted by ဇီဇီ on Nov 9, 2013 in Community & Society, Creative Writing, Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 49 comments
ဒါကတော့ ဟိုရှာဒီရှာ ရှာရင်း ဟိုတွေ့ဒီတွေ့ တွေ့လာတာ။ လင့် မမှတ်လိုက်ရဘူးးးးး၊ အဲလော့ ဘယ်လောက် မှန်မယ် မသိဘူးးး
ဒီ လင့်လေးကတော့ http://myanmargazette.net/157728 ရွှေအိလေး ရေးထားတာ။
ဘီယာ ဘရန်းကို ရေးမယ် ဆိုကတည်းက အရင်တုန်းက ရွှေအိရေးခဲ့တဲ့ ပို့(စ) လေးပြန်ရှယ်မယ်လို့ တေးထားတာပါ။
ဘာလို့ဆို ကျနော်က ဘရန်းတွေ ရှာရမှာဆိုတော့ ဘီယာ itself ကို ရှာရမှာ ပျင်း (အဲလေ) အချိန်မရတော့မှာစိုးလို့ပါ။
အမှန်တော့ ဒီ ပို့(စ) ကို ကိုဘလက် နဲ့ ကိုမျိုးသန့် မွေးနေ့ မှာ တင်ပေးမယ် စိတ်ကူးပြီး ဒီ လောက် အချိန်ကြာသွားပါတယ်။
ဒီ ဘရန်းတွေကို ကြိုက်နိုင်မဲ့ အကိုကြီး ၂ ယောက်မို့ပါ။
အယ်ကိုဟော တွေချည်း စုရေးမယ် စိတ်ကူးသော်လည်း အရမ်းဖောင်းပွသွားမှာစိုးလို့ အရင်ဆုံး ဘီယာ ရေးမယ်။
နောက်မှ ဝိုင် နဲ့ ဟာဒ် လစ်ကာ လာပါ့မယ်နော်။
နို့မို့ ဖတ်ရုံတင် မူးနေမစိုးလို့ရယ်၊ အရက်သောက်တာ အားပေးသလေး ဘာလေးဖြစ်မှာစိုးလို့ရယ်။
သများရှာထား ဖတ်ထားတာကို ပြန်ရှယ်တာ။
လွတ်လပ်စွာ ရှယ်နိုင် ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
အိမ်က မဒီများ ကေဇီကို ရန်လာမထောင်ရင် ပြီးတာပါပဲ။
ပထမဆုံးပြောပြမှာက ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး ဘီယာ ၁၀ မျိုးတဲ့ဗျားးးးးးးး။ ဘာတွေတုန်း ကြည့်ရအောင်။ ဇယားထဲမှာ အော်ရီချင်တယ် နိုင်ငံနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ နမူနာပြထားပါတယ်။ ။ ရှာရတာ မကြာပါဘူးးး ဒီ ဇယားလုပ်ရတာ ကြာတာပါ။
World’s Most Popular Beers:
‘The Drinks Business’ Names Top 10 Biggest Brands Of 2011
နောက် လာမှာကတော့ ကွာလတီ အကောင်းဆုံး ဘီယာ ၁၀ မျိုးပါတဲ့။ ဘယ်လောက် ကောင်းသတုန်း ကေ့(စ) စတာဒီ လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့မလား လို့ ပိတ်သတ်ကြီးရယ်။
ဖွဲ့ဖြစ်ရင်တော့ “ကျောက်” ကို ခေါင်းဆောင်တင်ရမှာပဲ။ ဪ ဆောဒီးးးး သူက ရာသက်ပန် ရှောင်လိုက်ပြီ ဆိုလား ဘာလားးးး ဟေးဟေးဟေးးး
Top 10 Quality Beers
ဒါကတော့ အကြီးကျယ်ဆုံး ဘီယာ ဘရန်းတွေပါတဲ့။ ဘာတွေ ကြီးပြီး ကျယ်လည်းတော့ မသိ။ တစ်ချို့ ဘီယာတွေ ကြားကို မကြားဖူးတာ။ ဟိဟိ။
သောက်ကြည့်သင့်တဲ့ ဘီယာ ဘရန်းတွေပါတဲ့။ ၁၃ မျိုးတောင် ရီကောမန့်လုပ်ထားပါတယ်။
နံပတ် ၈ ဟို ဂါဒင်း တစ်မျိုးပဲ သောက်ဖူးပါတယ်။ ဘီယာထဲ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အဟွာလေ။ ဘဲနဲ့ ပေါင်းတာ။ ဘဲပေါင်းဖို့ ဘဲပေါင်းဖို့ ကြိုက်တာကိုပြောတာပါ။
ဒါတွေပြီးတဲ့နောက် ကေဇီလည်း မနေနိုင်။
ပို့(စ) ပါ အချက်အလက်များနည်းနေမလား ဆိုပြီး ဘီယာ ဆိုင် ကို …………………………………………………………..
အွန်လိုင်းမှာတင် ကျုပ်တို့ မြန်ပြည်ကြီးမှာ ဘာ ဘီယာတွေ ခေတ်စားပါလိမ့်လို့ ရှာလိုက်တော့ အောက်ပါ အတိုင်း သွားတွေ့ပါတယ် ပလိတ်သတ်ကြီးးးးးး
အနော်တို့ ဘီယာတွေအတွက် ဓာတ်ပုံဆရာ ကောင်းကောင်းရှိသင့်ပြီထင်ပါရဲ့။
ရှာလိုက်တိုင်း ဘီယာပုလင်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ရိုက်ထားတာမတွေ့ရ ကလေးမတွေ ကိုပဲ အသားပေးရိုက်ထားတဲ့ ကြော်ငြာချည်းပဲ။
အနော်တို့ လူမျိုးက ဘီယာကို နှခေါင်းနဲ့သောက်တယ်ထင်သွားပါဦးမယ် ပလိတ်သတ်ကြီးရယ်။
နိုင်ငံတကာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရနိုင်တာ ဒီ ဟာတွေပဲ ရှိတာကလားးးး အဟွတ်!!!!!!
Beers in Myanmar
ဒီ တစ်ပုံပဲ လှတပတ
အဲလာကြောင့် အနော်လည်း မြန်မာပဲ။
Myanmar Beer – Double Strong
နောက် “ကျောက်” ပြောထားလို့ ကမ်ဘောဒီးယားတို့ ထိုင်းတို့ ဗီယက်နမ် ဘီယာ ဘရန်းတွေ ခြေဦးလှည့်ချင်သော်လည်း အဲတာတွေ လိုက်ရရင် အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေ ကုန်ရချည်ရဲ့ ဆိုပြီး
စလုံး က အကြိုက်ဆုံး ဘီယာ ၆ မျိုးကိုပဲ စာရင်းပြုစုရင်း နိဂုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် ပလိပ်သတ်ကြီးးးးးးးးးးး
ဝေးချက်ကလည်း ဂလိုတွေ လိုက်ရှာမှ တိုက်ဂါးကို စလုံး ဘရန်းသိတယ်။
Most popular beer in Singapore
Tiger Beer: Singapore
Budweiser: United States
ဘိုက်လည်း မပူစေနဲ့ ပေါ့ဗျာ။
တောက်. ဘယ်မတုန်း ကီရင်း
ငဒို့မျက်ခွက်မှ မထောက် တော့ပ်တန်းထဲမဝင်တာ
Ps ခုတော့. တိုင်းဂါးမှ တိုင်းဂါးပဲ.
နာ သိပ် မကျွမ်းကျင်လို့ ကျန်ခဲ့မှာတွေ ရှိနိုင်တယ်။
တိန်… ကေဇီတို့ အချွန်နဲ့မ ခေါင်းတပ်ပြီ…
ဝါသနာကလည်း လျှာမရှည်ရရင် မနေနိုင်တာမို့…
သေသေခြာခြာ မန့်ပေးပါ့မယ်… သက်ဆိုင်သူ စိတ်ကောက်ရင် ရှင်းပေး…
Erdinger တို့ Kloster တို့ Beck တို့ မပါတာ ဆားမပါသလိုပဲ…
ကွာလတီ နံပတ် ၈ မှာ Beck ပါတယ်လေ။
အရင် အတွေ့အကြုံအရ ပြောပေးရတာပါလို့ ပြောလိုက်နော်။
( အမှန်တော့ ဒီ ပို့(စ) ကို ကိုဘလက် နဲ့ ကိုမျိုးသန့် မွေးနေ့ မှာ တင်ပေးမယ် စိတ်ကူးပြီး ဒီ လောက် အချိန်ကြာသွားပါတယ်။ )
ကဲ ကဲ ဒီညနေ စမ်းကြည့်ဦးမှ ၊
ဒါပေမယ့် သားသားက နည်းနည်းနဲ့ တာသွားတဲ့
ဂရင်းအပြာပဲ ကြိုက်တယ် ၊
နောက်မှ တပ်ရမဲ့ နာမည်တွေများနေလို့။
ဆြာဝန်က.. ကိုလက်စရောတက်လို့ဆိုပြီး…ဘီယာဖြတ်ခိုင်းထားပါတယ်ဆိုမှ.. ဘီဘီတွေထိုးပြနေတယ်..
ကိုရိုးနား(မက်ဟီကို) ကို.. လိုင်းမ်လေးနဲ့သောက်ရင်ဆွေမျိုးမေ့တတ်ကြောင်း….။
အကြိုက်ဆုံးလေးတခုဖြစ်တဲ့.. Budweiser ကို.. ဘယ်လ်ဂျီယံလို့အပေါ်ပိုင်းမှာရေးထားတာမှားနေတယ်..ပြောလိုကြောင်း…
မုယောနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့.. ဘတ်ဝိုင်ဇာဟာ.. ယူအက်စ်ထုတ်စစ်စစ်သာဖြစ်ပါကြောင်းနော…
Beer brewing in Budweis dates back to the 13th century. A few hundred years later, two breweries were founded in the city that made beer which they called “Budweiser,” both being beers from the city of Budweis, which was thenapart of the Kingdom of Bohemia. In 1876, the American brewer Anheuser-Busch began makingabeer which it also called “Budweiser”. This led in 1907 to the “Budweiser trademark dispute” between beer companies claiming trademark rights to the name “Budweiser”.
အနော်မှား တာ တဂျီးရေ။
ဟိုလိုပြင်ရမှာ အလုပ်ရှုပ်လို့ တဂျီး ကော်မန့်ကို ဟိုက်လိုက်လုပ်လိုက်ပြီ။
ဘီယာထဲမှာ အဲလာကို အရင်ဆုံး စသောက်ဖူးတာဖြစ်ပါဒီ။
ကပ္ပိယ ​တွေ ဘုန်းကြီးမသိ​အောင်​ခိုး​သောက်​လို့ရ​စေတဲ့နည်း​ပေးပါလား
တော်ကြာ ခိုးသောက်သူတွေ ပွါးများလာ ဘယ်နဲ့ လုပ်မတုန်းးး
မောင်ငေး ကလည်း လေ့လာသွားပါဒယ်ဂျ
အကိုကြီးတွေ အတွက် ရေးထားတဲ့ ပို့(စ) ကလေးတွေမလာရဘူးးး
ဖွားမေ အကြော်ကြော်တာ သွားကူချည်။
ကျုပ်ကတော့.. အဆ ဟိထက်စာရင်.. ဆ ပိုရိုကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျ..
တိုကျိုမှာတုံးက.. တညထိုင်သောက် ၁၀ဗူးလောက်အသာလေးပဲ..။
အဲလာ ဂျာပွန် ဘရန်းလားးးး
အဲလာတွေတော့ မသိတော့ဘူးးးး ဟီးဟီး
ဂျာပွန်ထုတ်ပါ..။ ဆပိုရိုဆိုတာ.. ဂျာပွန်မြောက်ပိုင်း.. ဟော့ကိုင်းဒိုးကျွန်းမြို့တော်နာမယ်ပေါ့…
ကေဇီစာရင်းထဲ.. ဘတ်လိုက်နဲ့..ဘတ်ဝိုက်ဇာက..တကုမ္ပဏီထဲထုတ်တာဖြစ်ပြီး.. ဘတ်လိုက်ကို.. မိန်းမတွေအပါအ၀င်.. ကျမ်းမာရေးနဲ့(နည်းနည်းပိုညီတဲ့) အပျော့လေးသောက်ချင်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာလေးပါဖြည့်ပေးလိုက်ကြောင်း…။
စလုံး က ၆ မျိုးမှာ တောင် ၁ မျိုး မမြင်ဖူးဘူးးးး
နာကတော့ တိုင်းဂါးမှတိုင်းဂါးပဲ တခြားဟာတိုးဘူး။ ဟင့် ဗိုက်ပူတယ်ချိုလို့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူးအေ
အနော် ကျား မကြိုက်ဘူးးး
ကြားဖူးနေတယ်။ ချက်နည်းမသိဘူး။ ကဲတင်ဇေသတီးချွေးမွလေးရေ မျှော်နေဘာမည်
ဒေါ်ရွှေအိနဲ့ ခိုင်ဇာတို့ရေ…..ကျူပ်စိတ်တွေကိုလာလာဆွနေသလိုဘဲ။ မြန်မာပြည်ကဘီယာတွေထဲမှာ ဆိုရင်တော့ မသောက်ဖူးတာ မရှိသလောက်ဘဲ။ အကုန်သောက်တယ်။ ဘာပဲပြောပြောညီးတို့ ၂ယောက် ကို တင်းတယ်အေ…။ ဒီနေ့ ပိုစ်၂ခုဖတ်လိုက်ရတာ လေချဉ်တွေ တက်တယ်အေ..။ ဒီလိုပြောတာကိုလည်း ကျုပ် မိန်းမတော်ကြီး မသိပါစေနဲ့အေ..။
ဒါ မောင်လေးတွေ အတွက် ဟုတ်ဘူးးးး
လာပြီး ငမ်းပြီး သရေမကျနဲ့။
ဟွင့် တားက ကရေး မဟုတ်တော့ဘူးဂျ..။ လူကြီးဖြစ်နေဘီ..။
တောအရက်နဲ့ အရက်ပြန်မှားသောက်မိဦးမယ် ဗေးကလုံ!!
မမြင်ရတာ အတော်တောင် ကြာနေပြီနော်…ဒေါ်ခိုင်ဇာရေ…။
အမှန်တော့ ဒီ ပို့(စ) ကို ကိုဘလက် နဲ့ ကိုမျိုးသန့် မွေးနေ့ မှာ တင်ပေးမယ် စိတ်ကူးပြီး
ဆိုတာလေးတစ်ခုနဲ့ တင် လက်မတစ်ချောင်း ထိုက်တန်ပါတယ်…။
အမှန်ကို ၀န်ခံရရင်တော့ ကျွန်တော်က အရက်သမား ပါဗျာ…။
ဘယ်လောက်အရက်သမား စစ်သလဲ ဆိုရင် ဘီယာ တောင်
မသောက်တဲ့ အရက်သမား ဗျ…။
အရက်သောက်ရင်လည်း အလကားနေရင်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့ သောက်နေတာမျိုးတော့
အထိမ်းအမှတ်လေးတွေ နဲ့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သောက်ဖြစ်နေတာပါဗျ…။
မနေ့က ဒေါ်ခိုင်ဇာ ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်နာမည်ပါလို့ ပီတိဖြစ်တာနဲ့
သောက်ဖြစ်ပါတယ်…။ ဒေါ်ခိုင်ဇာကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ပေ့ါ…ဂေ့…။
ဒီနေ့တော့ MissUniverse2013 Miss Venezuela ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သောက်မလားလို့…။
မနက်ဖြန်တော့ ထားထက်ထက်လေး အတွက် သောက်မယ်လို့ ယာထားပါတယ်…။
ဟေးဟေး…ဂုဏ်ပြုရမယ့် သူတွေနဲ့ အထိမ်းအမှတ်တွေက အများသားဗျ…။
အစ်ကိုကြီးများအတွက် ဘရန်းဒက် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ…
အရက်တွေ အကြောင်းရေးတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ဇာရဲ့ ပို့်စ် ကို မျှော်နေမယ်ဗျာ…။
ယူအက်စ်မှာ ဆေးခြောက်ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားသုံးစွဲ… တရားဝင်လုပ်ဖို့.. လူထုအများစုကမဲပေးနေကြတာနဲ့.. တရားဝင်လုပ်ကြဖို့ကိစ္စပေါ့..
58 percent support marijuana legalization, poll says – CBS News
Oct 23, 2013 – For the first time ever, Gallup findsaclear majority of Americans support legalizing pot; support has jumped 10 points since 2012.
သူ့အနေနဲ့က.. တရက်ဘီယာ..အရက်.. နေ့တိုင်းချနေတာကနေ… အခုဆေးခြောက်ပြောင်းသုံးကြည့်တာ… အရက်တပါတ်တခါပဲသောက်ဖြစ်တော့တယ်တဲ့..
အခုလိုဆေးခြောက်တရားဝင်လုပ်တော့မယ့်..အခါသမယကြီးမှာ.. အရက်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေ ပူပန်စရာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်း..ဆက်ဆွေးနွေးနေကြတာပါ…
ဆေးခြောက်ရဲ့.. တရားဝင်လည်ပါတ်ငွေ.. ဒီနှစ်ထဲ.. ၁.၅ ဘီလီယန်ကနေ.. နောက်နှစ်ဆို.. ၂ဆ..၃ဘီလီယန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာပဲ….
6 days ago – A new report says that the legal marijuana trade is estimated at $1.43 billion for 2013, and that that number could be 64 percent higher by next …
အဲဒါနဲ့.. ကျုပ်လည်း.. ဆေးခြောက်ပြောင်းတော့မလားလို့…
အဲ့ ဆေးခြောက် ကိတ်စန တရားဝင်ဖြစ်ရင် ရဲတိုက်လေး လွတ်တော့မှာပေါ့နော်။
ကိုဘလက်ကြီး မလာမှာစိုးလို့ကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းနေတာ။
အစ်ကိုကြီး ဘီယာမသောက်တာ မသိလို့ပါတော်။
နောက်တစ်ပို့(စ) မှ ဘရန်း အရက်ကြိုက်တဲ့သူကြီး အတွက် ရေးပါ့မယ်။
အဘဘုတ်လည်း ဒီနေ့ ဥပုသ်စောင့်မယ် အားခဲထားတာ
သမီးလေးဇာ ရေးထားတာ သေချာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့
မြန်မာဘီယာလေး သုံးပုလင်းတော့ နှလုံးသွေးလေ လျှောက်အောင်
သွားဂလုလိုက်ဦးတော့မယ်ကွယ်။ မြန်မာပြည်က သူများ နိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင်
ယမကာဆိုတာ လူ့ပြည်နဲ့ အသူရာပြည်မှာပဲ ရတာပါကွယ့်။
အသက်အရွယ်လေးရတုန်း ကာမဂုဏ်တွေ ခံစားကြကွဲ့လို့
အဘဘုတ်တော့ မြှောက်ပေးသွားပါတယ် သာမီးလေးတို့ရယ်
အမဲသားကို ၀ိုင်နဲ့နှပ်ပြီး ပူစပ်ဟင်းချိုလေးချက်ကျွေးပါဆွိ…. အမဲသားကိုကာဆူကီ ဆိုလား
လုံးဝ မချက်တတ်တဲ့ အထဲမှာ အမဲသားပါသဟ။
ပြီးတော့ ဝိုင်နဲ့ လည်း ဟင်းမချက်တတ်ဘူးးးး
အဲ့လော့ တို့ ဆိုင်ကိုပဲသွားစားကြစို့။
ဘီဘီနဲ့ ပတ်သက်လာယင် …
ဟိုလူရီး နှစ်ယောက်ကို မေ့ထားလို့ ရမယ် မထင်ဘူးရယ် ..
ကျော့်အတွက် ပေါပါဒယ် …
အိုက်လူရီး နှစ်ယောက်ပေါ့ …
ကျော်ကို ဘီဘီ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ …
လောလောဆယ် အနေအထား အရဒေါ့ ..
ဘာလာလာ ဒေါင်းတယ် …
နို့ … နှစ်ခွက်ထက်တော့ ကျော်လို့ ရဘူးးး
အဲလူရီး ၁ ယောက်က ခုတော့ အရေးကို မလုပ်လို့ မရေးရဲဘူးးးး
နောက် လူရီး တစ်ယောက်ကိုပဲ ၃ ပို့(စ) လုံး တိုင်တည်ရေးမယ် စိတ်ကူးတယ်။
နင့်ဂိုသာဘီဘီနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာ…နာဂ …ဟိုနားစွန်နဖြားရပ်ကွက်က ဘဘ ဘလက်ကြီးလိုပဲ
ဘီယာ ထဲတော့ ဟန်နီကန် ကိုကြိုက်တယ်(အရသာ)
အခုလည်းမူးနေလို့ ဒီလောက်ပဲရေးခဲ့တယ်..ခွိခွိ :boss:
အဲလာ ဆို အနော် မှားရေးမိပြီပေါ့နော်။
စ ဘရန်း မိမှတော့ ဆက်ရန်း မယ်။
အဗာတာ ပုံထဲကလိုဆို …
ဟိုနားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်က လူကြီး တစ်ယောက် ဘယ်လိုပဲ မှောက်မှောက်
ကြီးမိုက် တစ်ယောက်ကတော့ အေးဆေး ဆိုဒဲ့ သဘောပေါ့လေ …
ဟီဟိ … ရန်တိုက်ပေးဂဲ့ဘီ …
ဟန်နီကန်လေးပဲတောက်တယ်..တားတားတို့က…အဟိဟိ …အမဲခြောက်ထောင်းလေးနဲ့ .အဟိဟိ
မူယာလေးပြင်ဆင်ပေးမယ့် ငါးရှဥ့်ခြောက်စပ်လေးနဲ့ မြည်းချင်တာ့…အဟိဟိ
နာ့ ညီမလေးပဲ မျက်စောင်းထိုးနေတယ်။
အဲလာဆို မမကို ဘီယာ တိုက်။
သြော်…. ဘီယာ…. ဘီယာ…
တစ်ခါက ဘီယာဟာ အရက်တော့ မဟုတ်ပါ ဆိုပြီး သီချင်းလေးနဲ့တောင် ကြော်ငြာဖူးသေးတယ်ထင့်….
ဟန်နီကန်က လွဲရင် မသိတာမို့
မသောက်တတ်ပဲ သူများကို ဆရာလုပ်ချင်သေးတယ်။
ဇ ကတော့ ………………..
အပေါ်မှာ ဘီယာဘရမ်းတွေ အများကြီးတွေ့တယ်
တော်တော်များများမှ တော်တော်များများကို မသောက်ဖူးဘူး
တချို့ဟာတွေဆို ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး …..
သေရည် သေရက်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့
မရှိရင် ရှာပါတယ် …..
မှတ်မှတ်ရရ …. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ဒါကာမှာ
မယ်မယ် ဆီ လာခဲ့ဟေ။
ရေနွေးကြမ်းးးးး ကို အရက်ပြန်ခပ်ပြီးးးးး
ကိုလက်စရောကို မြင့်စေတယ်ဆိုတာကြီးကို.. လန့်တာ..။
သာမန်အဲလိုပြောရင်.. ကိုလုက်စရောတက်.. သွေးကြောပိတ်.. သေဖွယ်ရာသာရှိသည်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေသဗျို့…
ဘီယာသောက်တာ ဟာ အရိုးပွ ရောဂါ ကာကွယ်တယ် ကြားဖူးတယ်… ဟဲ…
ဇာတ်လမ်း စ ပြီပေါ့…
ဒဂုံ အနီတော့ ကြိုက်တယ်ဗျ… အရက်က ဗိုက်မပြည့်တော့ တော်တော် ၀င်တယ်.. ဘီယာကတော့ ဗိုက်တင်းရင် ဆက်မသောက်နိုင်တော့.. မမူးဘူးပေါ့… အနီ တော့ မပါလေ.. သူက ၂ ပုလင်းဆိုလဲ ကွဲ ချင်ချင်ရယ်…
ဒဂုံအနီ ကို မသောက်ဖူးဘူးးး
အများကြီးသောက်ရင်တော့ဘယ် အရည်အရက်မဆို ရုပ်ကျတာပဲ ရယ်။
ရူပါ လန်းဆေးပါဆို… ဒက်ကထပဲ…